I-Kamaniskeg Waterfront Cottage - I-Airbnb
I-Kamaniskeg Waterfront Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMeaghan
Phola nentsapho yonke kule ndlu inamagumbi okulala ayi-3 inomtsalane. I-Kamaniskeg Cottage lixesha lonyaka eliyi-4, indlu esemaphandleni enamagumbi okulala ayi-3 ekwiimitha eziyi- ukusuka ekupheleni kwamanzi kunye nendawo yokubeka isikhephe ngeenyanga ezifudumeleyo kunye neendlela zokuhamba ngekhephu ngaphandle nje komnyango wakho ebusika.
Sela ikofu yakho yasekuseni ukusuka kumgangatho omkhulu okanye uhlale ngaphakathi ngeefestile eziqala phantsi ziyokutsho kwisilingi uze ulibone kakuhle ichibi. Le ndawo inazo zonke izinto ozidingayo xa usiya kwiholide.
Kwimizuzu eyi-5 ukusuka eCombermere nemizuzu eyi-15 ukusuka eBarrys Bay, indlu esemaphandleni iKamaniskeg inento elungiselelwe wonke umntu. Le ndawo inamagumbi okulala ayi-3 (amabini afakwe iibhedi ezinkulu kunye nebhedi elala abantu ababini), kunye negumbi lokuhlambela elineendawo ezininzi. Kukho nekhitshi, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala, igaraji, iveranda enkulu kunye neetoni zendawo yangaphandle. Zikhuphe esixekweni uze ubone izinto ezimangalisayo ezikhoyo kwichibi laseKamaniskeg
Umbuki zindwendwe ngu- Meaghan
outdoor enthusiast • trent university alumni • insurance claims supervisor
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Combermere